yakakwira spout yekugezera pombi nhema
musha / Mabheji ekugezera / Imwechete Yakabata Bathroom Faucets / WOWOW Yekugezera Faucet Ine Swivel Spout nhema
Yepamusoro-mhando isimbi isina tsvina, wowowfaucet Matte Black Kitchen Faucet Imwe Chibatiso nehunhu hwakanaka uye chengetedza mari, nekukurumidza kuendesa, makore matatu waranti!
2320200B mirairo yekuisa
Zvichienzaniswa nemapombi echinyakare ekugezera, mapombi anoburitsa 2320201B ane mukana wekugona kudhonza, izvo zvinowanzo dhonza 40-60 cm, izvo zvinowedzera nzvimbo yekutsvaira, senge makona asingakwanise kushambidzwa nesingi uye anogona gezwa nyore; Zviri nyore kubvisa uye kusuka bvudzi rako.
Kushandiswa kwepasirese: faucet yeiyo kunyura kana dhishi, inogona kuisirwa imba yekugezera uye mukicheni, yakakwira arc pamwe ne360-degree kutenderera inokodzera kuwira kwepiri uchishandisa kana uchiita mabasa ekuwandisa.
Hunhu hwepamusoro hwepanhasi bhizinesi tap: kutema kupera, kusiyanisa uye kunguva, kunogona kumira zuva nezuva kukanda uye ngura, isina tsvina soutari uye zinc simbi muviri, yakaoma uye yakasimba, yakakwana imba, yekugezera, kicheni, hotera, hotera, imba yekutandarira uye imba. nezvimwe ..
Zvemhando dzemhando: tucan yemvura hose mune yakajairwa neAmerican kuburikidza neyekuchengetedza zvinyorwa, materu asina kudonha, uye anotungamira-asina goridhe remukati inonamatira kuti ave nechokwadi chekuyera kwemvura mwero, zvese zvekuisa machira zviri musimbi isina tsvina.
SKU: 2320201B Categories: Mabheji ekugezera, Imwechete Yakabata Bathroom Faucets Tags: Yakakwira Arc, Matte Black, Single Handle